Aabbayaasha da’da weyn waxay dhali karaan carruur maan-dhiman - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Aabbe kor u haya ilmo uu dhalay oo laba bilood jir ah. Sawirle: Hasse Holmberg /TT
Aabbayaasha da’da weyn waxay dhali karaan carruur maan-dhiman
La daabacay torsdag 27 februari 2014 kl 10.08
Cilmi-baaris ay isla sameeyeen khubaro isgu jirta iswiidhish iyo maraykan oo lagu baaray dhammaan dadkii Iswiidhen ku dhashay intii u dhexeysey sannadihii 1973 ilaa 2001 ayaa lagu ogaadey xiriir adagi ka dhexeeyo da’da aabbayaasha iyo khatarta ilmaha uu dhalaa ugu sugnaan karo in ay ku dhacaan cduruada maanka ama maskaxda.
Markii la barbardhigay aabbe da’diisu tahay 24-sano jir, wuxuu aabbaha 45-sano jirka ahi kkatar labajibbar ah ugu sugan yahay in uu dhalo ilmo qaba cudurada maskaxda. Wuxuu in labajibbar ka badan ugu sugan yahay ilmahaas uu dhalay uu noqdo mid maandooriyayaasha aad u isticmaala ama ay u fududahay in uu nafta iska qaado oo is dilo.
Waxaa 13 jeer ka sarreysa khatarta in uu ku dhaco cudurka maanka wax u dhima oo lagu magacaabo ADHD iyo in suurtagalka in uu qaado cudurada isku buuqa xad-dhaafka ay 25 jeer ka sarreyso ilmaha uu dhalay aabbe da’ yar.
Natiijadaani waa mid ku salaysan heer kooxeed, ayuu yiri caalinka Paul Lichtenstein, oo ka mid ahaa dadkii wax ka soo diyaariyey cilmi-baaristaan.
Sidaas oo ay tahay ayaan haddana la oran karin ilmaha uu dhalo aabbaha da’da weyni uu isla markiiba qaadayo mid ah cuduradaas, sida ka muuqata cilmi-baaristaan oo lagu soo daabacay wargeyska Jama Psychiatry.
Balse aabbayaasha da’da weyni waxay leeyihiin khibrad iyo tacliin sare oo ay ku kaa,ilaan cilladahaas si ay carruurtooda u siiyaan koritaana y kaga difaacayaan caafimaad-darro xagga maskaxda, ayuu yiri Paul Lichtenstein. Haddii arrintaasna xisaabtanka lagu daro, waxaa kolkaas la oran karaa in aysan khatar sidaas u sii weyn haysan aabbaha 45-sano jirka ah.